Home Wararka Booliska oo la hadlay Khasaaraha qaraxii ay ka badbaadeen Xijaar & Xildhibaano
Booliska oo la hadlay Khasaaraha qaraxii ay ka badbaadeen Xijaar & Xildhibaano
Taliska Ciidanka Booliska dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa shaaciyay khasaaraha ka dhashay Qaraxii is-miidaaminta ahaa ee ka dhacay xeebta Liido, degmada Cabdicasiis ee Gobolka Banaadir.
Afhayeenka Booliska Cabdifitaax Aadan Xasan ayaa waxaa uu sheegay in qaraxa uu fuliyay is-miidaamiye isku soo xiray jaakad waxyaabaha qarxa ah, uuna isku qarxiyey afaafka hore ee Maqaayada Pescatore Sea Food oo ku taalla xeebta Liido.
Afhayeenka ayaa xaqiijiyay in qaraxa oo jugtiisa laga maqlay inta badan degmooyinka Gobolka Banaadir uu ka dhashay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac, wuxuuna sheegay in saddex Askari ay ku dhinteen qaraxa, halka 8 qofna dhaawac uu soo gaaray.
Wuxuu intaas kusii daray Afhayeen Cabdifitaax Aadan in wax dhibaato aysan gaarin Mas’uuliyiin uu sheegay inay ku jireen Maqaayada uu qaraxu ka dhacay, isla markaana Ciidanka amniga ay ka hortegeen qaraxaas, waa sida uu sheegay Afhayeenka oo la hadlay Warbaahinta.
Dadka waxyeelada kasoo gaaray qaraxa Caawa dhacay xeebta Liido ayuu Afhayeenka tilmaamay inay ahaayeen dad shacab ah oo ku Ganacsanayey hareeraha laamaiga, waxaana dadka dhaawacmay ku jira Taliyaha Saldhiga degmada Cabdicasiis Liibaan Shidane.
Taliyaha Booliska dowladda Federaalka Jen. Cabdi Xasan Maxamed Xijaar iyo Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka cusub ayaa kulan afur ah ku lahaa maqaayada la qarxiyey, kuwaasi oo ka badbaada qaraxii Caawa ka dhacay Liido.
Previous articleVideo: Qarax ayaa caawa ka dhacay maqaayad ku taaalo xeebta Liido
Next articleGud. Gudiga X. Khilaafaadka oo waxba kama jiraan ku sheegay doorashadii Ceelwaaq
Khasaara kala duwan oo ka dhashay Qaraxii Dhuusa-mareeb ka dhacay